Ụlọ elu crane Safety System Ndị na-emepụta & ndị na-eweta ngwaahịa |China Tower crane Safety System Factory
RC-A11-II Nchekwa ibu oge egosi maka Tower crane SLI.
1.Multifunctional nchekwa usoro maka Tower crane
2.Large 10 inch ihuenyo mmetụ.
3.Friendly nwoke-igwe interface
4.Mgbe niile nwere ike bulite ọhụrụ Load Chart site USB mbanye.
5.Multiple ibu chaatị nwere ike bulite n'otu oge
6.Easy mmemme nke Load chart on software nke kọmputa.
7.Factory okpomọkụ ule, mgbochi nsị na mgbochi corrosion.
Na-adịgide adịgide, Stable, Ọ dị mfe ịhazi;
Usoro nlekota ala
Usoro nleba anya nke ala na-enyere ndị ọrụ ala aka ilele data ozugbo na ọnọdụ mgbochi nke crane ụlọ elu na ụlọ ọrụ.Sistemụ nlekota ala nwere ngwaike (igbe nleba anya ala, antenna, 232 na eriri USB ntụgharị, eriri ọkụ) yana sistemụ ngwanrọ.
Sistemụ Ngosipụta Ngosipụta Ọnụ Ahịa China Crane
Anyị azụmahịa stick maka isi ụkpụrụ nke "Quality nwere ike ịbụ ndụ na ike, na track ndekọ ga-abụ mkpụrụ obi nke ya" n'ihi na N'ogbe Price China Shipyard Floating Crane Load Moment Indicator System Wt650V3, With a fast growth and our customers comes from Europe, United States, Africa na gburugburu ụwa.Mmadụ Bịa na-aga anyị factory na-anabata gị iji, n'ihi na ndị ọzọ ajuju biko agaghị ala azụ ijide anyị!
Sistemụ nchikota maka ụlọ elu crane, Mobile Crane Qatar, Ngosipụta oge ibu, Nchekwa Ugo elu Tower Crane, Ihe ngosipụta oge ibu crane Tower, Chọrọ nchekwa nchekwa ụlọ elu crane,